MURAAYADA NAQSHADDA MUUQAALKA LEH EE GACMAHOODA, DOORASHOOYIN LOOGU TALAGALAY DIYAARINTA MAQNAASHAHA - NAQSHAD WEYN
Ilaa hadda, in ka badan darsin oo naqshado kala duwan oo dabiiciyadeed oo asal ah ayaa la isku uruuriyey, taas oo dacha u adeegtey sidii qoryaha loo isticmaalo qoryaha, iyo jawi qurux badan oo hawada nadiif ah, iyo walxo muhiim ah oo lagu qurxiyo dhulka dalka. Qaar badan waxay raadiyaan inay qalab u yeeshaan sida nooc ka mid ah muraayadda oo ay gacmahooda ku haystaan ​​iyagoo gacan ka helaya qalabka jira. Si qorshe loogu guuleysto sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qaybo farsamo oo habraac ah.
Marka loo eego qaabka ugu weyn ee naqshadeynta, dachas ayaa loo qaybiyaa 3 nooc:
Ma taqaanaa? Waxaa jira ilaa 8 nooc oo ah habka loo sameeyo dab-demiska (tani waa aasaas keliya). Waxaa intaa dheer, waxaa jira noocyo badan oo dab-damis ah.
Si aad u qurxiso goobaha beerta, waxaanu kugula talinaynaa inaad ka akhridid ​​sida loo samaysto dhir diiran, dheji godad ah, isku dhafan, dhagax qallalan, boodh qallalan, ilo, googo, jidad ka yimaada alwaax iyo qoryo, iyo sidoo kale beerta ubaxa ee taayirada iyo dhagxaanta.
Waxsoosaarayaashu waxay bixiyaan mulkiilayaashooda dhammaan noocyada moodooyinka lagu sameeyo warshadaha fogaanta dillaaca, qaar ka mid ah kuwaa oo ka shaqeeya gaaska. Bal qiyaas muuqaal dabiici ah oo ku dhejinaya dhuunta gaasta iyada oo loo marayo qaybtiisa ka dibna ka hor fadhiya gaaska dabka qaboojiyaha waa mid aad u adag, laakiin wali way jiraan.
Laakiin inta badan inta badan dadka degaanka xagaaga waxay doorbidaan dab-damiska dabka iyo dabka qiiqa ka soo baxa dhuxul ama dhuxul. Qaar badan oo ka mid ah waxay ku dhistaan ​​firfircooni firfircoon oo leh gacmahooda. Nasiib wanaag, tani ma aha ganacsi khatar ah.
Ma taqaanaa? Isku aadka ayaa waxaa soo saaray Jean Chancel 1805, ka dib markii 18 sano jir uu u dhashay Janno Debereiner uu soo saaray shidaal.
Sida caadiga ah, dhismaha dhulka hoostiisa oo dhulka hoostiisa ah, geeska toban-mitir mitir ee mitir mitir ah ayaa la qoday ka dibna ka dib markii ay kor u qaadeen dusha birta waxaa lagu rakibay. Caadi ahaan ujeedadaas awgeed ma ahan giraan aad u ballaadhan oo laga soo gooyo foosto bir ah ama boorso hore.
Ka dibna derbi ayaa lagu dhajiyaa hareeraha:
Wareegga ugu fiican ee derbiga la dhisay waa 15 sentimitir. Waxyaabaha laga sameeyey waxa loo dhisay, waxay ku xiran tahay inta u dhexeysa mashiinka dhaadheer oo leh qalabka wax lagu qurxiyo, mashiinka dhoobada dhoobada ama daboolka gaarka ah ee dabka lagu shido.
Farqiga u dhexeeya dhogorta birta iyo derbiga qurxinta waa in laga buuxiyaa ciid.
Waxyeelo kale oo caan ah oo laga sameeyo birta loo yaqaan "corrugated iron iron" waa mid caan ah:
Si arrintan loo sameeyo, u qaado laba qaybood oo bir ah, dhererka kaas oo isku mid ah isla markaana u dhigma dhererka dhererka la qorsheeyey.
Dhererka xaashida ayaa ka duwanaan doonta. Marka ugu horeysa, waa inay ahaataa mid la mid ah oo laga dhigi karo giraanta wareegga mitir (oo lagu daray dhowr mitir oo loo socdo habka hal dhinac oo ka mid ah xaashida kale si loo dhigo.
Xaashida labaad ayaa la doortaa yaryar - waa inay sameeyaan giraan leh dhexroor oo ah 80 sentimitir.
Kadibna giraanta yar yar ayaa loo geliyaa midka weyn si ay xaruntoodu u degto.
Meelaha la abuuray ee u dhexeeya siddooyinka waxaa lagu daboolay ciid.
Fiidiyoow: samee dabkaada Natiijadu waa firfircooni aad u fiican, taas oo aad u fudud in la sameeyo.
Xulashadan, dabka waa inuu qodaa god:
Dhexdhexaadiyuhu waa mid aan ku xirneyn oo wuxuu ku xidhan yahay doorbidiisa shakhsi ahaaneed iyo baahiyaha milkiilaha, hase yeeshee qotoqoshadu badanaa waa qiyaas ahaan afartan mitiritir.
Qeybta hoose ee ceelku waxay ku dhacaan shan iyo toban sintimitir lakab oo quraarad ganaax ah.
Dhuxul diimeed oo qoryo ah ayaa lagu dhisaa derbiyada godadka iyadoo adeegsanaysa hoobiye dhoobo ah.
Lakabka yaryar ee dhulka ayaa laga saaraa cidhifyada qoryaha la dhammeeyey si loo sameeyo goobo leh dhexroor oo 4-5 mitir.
Wareegga soo-baxa waa inuu ku xiran yahay godad dhejis ah.
Farqiga u dhexeeya aagga la jiido iyo godadka dabku waa in lagu daboolaa ciid.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sida habboon si aad u sameysid sawirada beerta goobta, sidaad u barbaarin laheyd beertaada gacmo-gacmeed, sidaad u samaysan lahayd tuumbooyinka, sida loo sameeyo balaasti, sida loo nadiifiyo ubaxa beerta.
Xeerarka lagu dooranayo meel loogu talagalay xero
Shuruudda ugu weyn ee la soo bandhigo dhammaan dabka oo aan ka reebaneyn - waafaqsanaanta xeerarka amniga dabka. Xarumaha dariiqa waa inaysan kudhicin meel u dhaw 4 mitir oo geedo iyo xoortay. Laga soo bilaabo dhismayaasha iyo dib-u-dhiska waa in lagu kala sooco meel u jirta ugu yaraan 3 mitir.
Laguma talin in la sameeyo dab iyo meel u dhow xudduudaha goobaha, sidaa daraadeed derisku ma qabaan sigaar xad dhaaf ah. Caadi ahaan dabka waa la qabanqaabiyaa meelo sare.
Waa muhiim! Waa arrin adag in laga dhigo meel dab-damis ah oo u dhow goobaha kaydinta gaaska dabiiciga ah, qalabka dabka lagu gubi karo iyo waxyaabaha kiimikada ah.
Sameynta goobaha madadaalada
Xarunta Dacha waxay ku samaysaa goobta aan ka helaynin adeegyo badan oo ah qaabeynta qurxinta, taasoo gacan ka geysaneysa qaab-dhaqameedka iyo soo jiidashada hareeraha hareeraha. Sidaa daraadeed, sida hal element oo ah nidaamka dacha wuxuu u dhif u yahay falal.
Caadi ahaan, aag madadaalo leh oo leh qaabka aagga lagu hareeraysan yahay ee ku wareegsan cawska cagaaran ayaa la sameeyaa agagaarka dabka. Goobaha socodka waxay u horseedaan aagagga madadaalada, iyo kuraasta (kuraasta, kuraasta kuraasta, kuraasta, kursiyada, miisaska, qurxinta qurxinta qurxinta ee qoryaha) waxay ku taala dhulka.
Goobta dabka, waxaad sidoo kale ku ridi kartaa kursi sofa ah oo ka samaysan baalal gacmeed oo aad samaysay.
Goobta dabka ee waddanku badanaa waxay qabataa hawlaha isku midka ah ee guriga gudihiisa. Xubnaha qoyska iyo martigooduba waxay isugu yimaadaan si ay u nastaan ​​oo ay u helaan nabada maskaxda oo ay ka gooyaan walaaca maalin kasta oo qof walba noloshiisa casriga ah uu ka buuxo jajab jajab ah oo qoryo, qiiqa kareysa iyo diirimaadka dabka. Goob qurux badan oo shaqeynaya dab ayaa lagu dhisay dhismaha xagaaga iyada oo la isticmaalayo gacmihiisa ayaa noqon kara ilo sharaf gaar ah ee milkiilaha. Marar badanna waxay noqotaa meel muhiim ah oo ku taal hareeraha hareeraha ah, sida muraayada markasta ay noqotey calaamad muujinaysa raaxada qoyska iyo fayoobaanta.